कसरी आईफोन एक्स मा एप स्टोरबाट अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्ने आईफोन समाचार
आईओएस ११ र आईफोन एक्सको आगमनको अर्थ एप्स स्टोरको सौंदर्यशास्त्र र अपरेसनमा ठूलो परिवर्तन भएको छ। एप्पल आईओएस अनुप्रयोग स्टोरले करीव पूर्ण पुन: डिजाइन पार गरिसकेको छ जहाँ विकासकर्ता कथाहरू र अनुप्रयोग सिफारिशहरू अब हाइलाइटहरू छन्। तर आईफोन एक्सको साथ धेरै हामीले अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्ने तरिका परिवर्तन भएको छ.
होम बटन र यसको एकीकृत टच आईडी सेन्सरको अनुपस्थितिको अर्थ यो हो कि अब आफूलाई पहिचान गर्न हामीले आईफोन एक्सको अनुहार पहिचान प्रयोग गर्नुपर्दछ। तथाकथित अनुहार आईडी जुन सँधै सक्रिय छ हाम्रो अनुहार चिन्ने प्रभारी र यस प्रकार हामीले डाउनलोड गर्न अनुरोध गरेका अनुप्रयोगको खरीदमा अघि बढ्नुहोस्। तर हामी कसरी अनावश्यक डाउनलोड बाट बच्न खरीद को पुष्टि गर्ने?
अहिले सम्म, जबसम्म हाम्रो आईफोनसँग टच आईडी थियो, जब हामीले पहिलो पटक एउटा अनुप्रयोग डाउनलोड गर्‍यौं तब हामीले आफ्नो पहिचान र यो गर्न हाम्रो इरादा पुष्टि गर्नुपर्नेछ औंठाछाप सेन्सरमा औंला राखेर होम बटनको तल मात्र एकीकृत गरिएको थियो। यस तरीकाबाट, आईफोनलाई यो थाँहा हुन्छ कि यो हामी हो र हाम्रो खाता पासवर्ड प्रविष्ट नगरीकन डाउनलोड र डाउनलोड गर्न अगाडि बढेको हो। तर आईफोन एक्स कुनै होम बटन छैन, यसैले अनुहार पहिचान नै हामीलाई चिन्ने प्रभारी हो, केही यस्तो छ जुन स्वचालित रूपमा स्क्रिनमा हेरेपछि हुन्छ, जुन हामी अनुप्रयोग डाउनलोड गर्दा सामान्य हुन्छ।
गलत कुञ्जी स्ट्रोकबाट कसरी बच्न सकिन्छ जुन एप्लिकेसनको स्वत: डाउनलोड गर्दछ? एप्पलले एक चरण थपेको छ जुन अहिले सम्म कुनै पनि उपकरणहरूमा अवस्थित थिएन: साइड बटन दुई पटक थिच्नुहोस्। यो साधारण इशाराले प्रणालीलाई थाहा दिन्छ कि हामी वास्तवमा अनुप्रयोग किन्न चाहन्छौं र यो त्रुटि होईन, र डाउनलोड स्वचालित रूपमा सुरू हुन्छ। एप्पल स्क्रीन मा भर्चुअल बटन को लागी विकल्प हुन सक्छ, तर यो यो प्राथमिकता छ कि यो एक भौतिक बटन थियो कि खरीद। त्यस्तै अनुप्रयोगमा खरीदहरूको लागि जान्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » कसरी आईफोन X को साथ अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्ने
फक लुइस आलोचना गर्न चाहँदैनन्, तर तपाईका लेखहरू सँधै यो स्तर अनुसरण गर्छन्, अपलोड गर्नुहोस् किनकि यो सबैको लागि उत्तम हुन्छ।
यदि तपाईं अन्तमा भर्न यो गर्नुहुन्छ भने म वेबमा जान छोड्छु
Jdjd लाई जवाफ दिनुहोस्
सबै पाठकहरू उन्नत ज्ञान पाउन पर्याप्त भाग्यशाली हुँदैनन्, जस्तो कि तपाईलाई जस्तो देखिन्छ। यस लेखले गुगललाई सब भन्दा लोकप्रिय खोजीमा ठीक त्यस्तै किसिमको आईफोन एक्समा अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्ने तथ्यलाई जवाफ दिन्छ। हामीले सबैका लागि लेख लेख्नुपर्दछ, यो तपाईको रुचि नभएकाहरूलाई पढ्न जत्तिकै सरल छ।
यो आलोचना गर्ने होइन, तर यदि तपाइँका सबै टिप्पणीहरू सँधै यो स्तर अनुसरण गर्दछन्, यसलाई अपलोड गर्नुहोस् किनकि यो सबैको लागि राम्रो हुनेछ। किनकि हिजोको टेलिग्राम एक्स को बारे मा नोटको लागि पनि थियो, अनुप्रयोगको बारेमा कुनै ज्ञान छैन।
यदि तपाईंलाई ब्लग मनपर्दैन भने, तपाईंलाई फेरि प्रविष्ट नगर्न आमन्त्रित गरिएको छ, यो नि: शुल्क हो।
ट्यूटोरियल आईफोन एक्स मा भोल्युम खोल्न जब?
त्यो हो कि म फेरि प्रविष्ट गर्न छैन, तपाइँको आमन्त्रित को लागी धन्यवाद
OMG, ट्यूटोरियल hahahahahaha को टुक्रा
तिनीहरू जानकारीको सबै समयको आलोचना गरिरहेका खराब वर्ग हुन् जुन मानिसहरूलाई थाहा छैन कि उनीहरूलाई उपयोगी हुन सक्छ कि भनेर, त्यहाँ यस्तो प्रकारका मानिस छन् जसले आलोचना गर्छन् र किन गर्दैनन्, यदि उनीहरूलाई रूचि छैन भने, तिनीहरू केवल पढ्दैनन्।
एल्डोफ पित्त भन्यो
खैर, लेखले मलाई धेरै मद्दत गरेको छ। म कसरी खरिद गर्ने भनेर स्पष्ट गर्न म एप्पललाई कल गर्न लागेको थिएँ। म तपाईंको भव्य वेबसाइटको भ्रमण गरिरहेछु। धन्यबाद
Aldof Gall लाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो लागि यो एक लेख हो जुन मलाई पहिले नै थाहा थियो कसरी गर्ने, मलाई यसको आवश्यक पर्दैन, तर म बुझ्छु कि धेरैका लागि यदि यसले काम गर्दछ भने कहिलेकाँही यसले तपाईंको र अन्य समयमा काम गर्दैन, म यो पनि बुझ्दछु कि लेखहरू लेख्नु हुँदैन। जति नै सजिलो छ तपाईले राख्नु भएको सबैको लागि ठूलो समाचार हो र अर्कोतर्फ त्यहाँ एप्पलको साथ केही आघात हुनेहरू हुन्छन्, पक्कै पनि उनीहरूसँग केही भयो जब तिनीहरू थोरै थिए र तिनीहरूले उदाहरणका लागि एउटा आईफोन फोरममा आलोचना गरे। , त्यसोभए तिनीहरू माउन्ट गर्छन् र गुनासो गर्छन् किनभने तिनीहरूलाई गलत जवाफ दिइयो, म मोबाइल फोन वा ब्रान्डसँग संलग्न हुन म सामसु Samsungको कुनै एकमा जाने छैन, साथै यो एक महान मोबाइल हो, सबैको स्वाद छ र त्यो ठूलो हो कि यो त्यो जस्तो हो, तर मेरो मतलब तिनीहरू हुन् जससँग एडाफ्सदाफा ब्रान्डको मोबाईल छ र तिनीहरू एप्पलबाट आलोचना गर्न केहि आउन पर्खिरहेका छन्, मेरो लागि उनीहरूसँग बचपनदेखि उनीहरूको केही आघात छ जुन उनीहरूलाई पुग्दछ, मलाई लाग्छ यो यस समयमा धेरैलाई ध्यानमा राखिनु हुँदैन, तपाई कहिँ पनि खराब समयहरूमा पुग्नै पर्दैन, यदि शीर्षक कसरी स्थापना गर्ने भन्ने देख्नुभयो भने .. .. पहिले नैतपाईंलाई थाहा छ किनकि तपाईं जानुहोस् र अन्य लेखहरूमा जानुहोस्। अभिवादन र अर्को बर्ष सबैको लागि सबै भन्दा राम्रो मध्ये एक हुन सक्छ।
यूट्यूबमा कालो ब्यान्डहरू छैनन्: आईओएस अनुप्रयोगले भिडियोलाई स्क्रिन ढाँचामा रूपान्तरण गर्नेछ
एप्पलले आफ्नो भिडियो प्लेटफर्मको लागि तीन अमेजन अधिकारीहरू राख्छ